NISA oo weerartay Shaqaalaha garoonka diyaaraha Aadan Cadde | KEYDMEDIA ONLINE
NISA oo weerartay Shaqaalaha garoonka diyaaraha Aadan Cadde
Shaqaaqo sababtay gacan ka hadal ayaa maanta ka dhacday goroonka diyaaradaha Muqdisho, waxaana muddo koobaan isku dhex yaacay shaqadii ka socotay garoonaka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Howlaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, ayaa muddo gaaban hakad galay maaanta, kadib markii ciidamo ka tirsan Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka NISA, iyo shaqaalaha waaxda hay’adda socdaalka, uu dhex maray gacan ka hadal sababay dhaawacyo.
Gacan ka hadalkaan ayaa yimid, kadib markii, Shaqaalaha Socdaalka ee ku shaqada leh hubinta dadka soo degaya ay damceen in ay hubiyaan dad ajaanib ah oo ka soo degay goroonka shalay, kuwaas oo u socday Hay’adda NISA, hayeeshee ay ciidamo dharcad ah oo NISA ka socday diideen in la baaro.
Ciidamada galay garooonka ee ka tirsan Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka, ayaa burburiyay agabkii shaqada oo ay ka mid yihiin Kumbuyuutarada iyo Tiimbareyaasha, waxaana sidoo kale burbur soo gaaray muraayadaha qeyta VIP-da loo yaqaan ee ay ka soo degaan dadka dibba ka yimaada.
Muuqaal la duubay inta shaqaaqadu soctay ayaa muujinaya labada dhinac oo is tuurneynaya qaarna isku dhagan yihiin, dad safar ahaa oo ka soo degay diyaaradda Turkish Airlines, safafna ku jiray ayaa isku dhexyaacay, taas oo sababtay in ay qaarkood hubin la’aan ka soo baxaan garonka.
Taliyaha Hay’adda socdaalka Koofi, iyo saraakiil ka sar sare oo ka tirsan NISA ayaa gaaray garoonka, xaaladda ayaana hadda deggan, waxaana dib loo bilaabay howlihii hakadka galay ee Garoonka.